Baarlamaanka oo mar labaad oggolaadey codsigii Raysalwasaare Sharmaarke - Wargane News
Home Somali News Baarlamaanka oo mar labaad oggolaadey codsigii Raysalwasaare Sharmaarke
Baarlamaanka oo mar labaad oggolaadey codsigii Raysalwasaare Sharmaarke
Fadhigii maanta ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ahaa mid ka duwanaa kuwii hore. Ajandaha fadhiga ugu muhimsanaa ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda. Waxaa soo xaadirey hoolka shiraraka ee Baarlamaanka Xildhibaano gaaraya 190 Xildhibaan.
Waxaa guuldaraystey wada hadal iyo waan-waan habeenkii xalay u socotey shirguddoonka, madaxda Kutlooyinka iyo raysalwasaraha oo dhinac ah, sidoo kale waxaa isla habeenkii xalay ka degey Muqdisho Madaxweyne Xasan Shiikh oo ka qayb-galaayey shirkii Midogwa Afrika, si uu wax uga qabto in xukuumadda aan la horgeyn Baarlamaanka maanta oo Sabti ah.
Raysalwasaare Sharmaarke ayaa ku khasbanaadey maanta in uu hortago Xildhibaanada isla markaana codsigiisa halkaas ku soo bandhigo kadib markii laga diidey warqaddii labaad ee codsigiisa ee maaintii shalay uu u direy Baarlamaanka.
Sharmarke oo khudbad kooban u jeediyey Xildhibaanada ayaa ka codsadey in la siiyo muddo 10 maalmood ah oo uu Xukuumadda ku soo dhamaystiraayo. Xildhibaano badan ayaa ku qayliyey raysalwasaaraha iyaga oo sheegey in ay meesha u joogaan maanta in xukuumadda codka u qaadaan. Raysalwasaare Sharmarke waa ka soo baxay fadhiga.
Shirguddoonka ayaa ka codsadey Xildhibaanadu in ay ka doodaan 10 maalmood ee xukuumadda lagu soo dhamaystiraayo, waxaana doodda kadib Shirguddoonku codsadey in la siiyo 15 daqiiqo oo ay isugu ururinaayaan fikradaha Xildhibaanjada ee kala duwan.
Afhayeenka baarlamaanka ayaa Xildhibaanada ku wargeliyey in cod loo qaadayo codsiga raysalwasaaraha, waxaana oggolaadey 139 Xildhibaan, 47 Xildhibaan ayaa diidey, waxaana ka aamusey 4 Xildhibaan.
Waa markii Saddexaad oo xukuumadda dib loogu laabto, Xukuumaddii u horeysey waxaa Sharmaarke ku dhawaaqey saq dhexe, 12 Janaayo, waxa uu dib ula noqdey 17 Janaayomarkii uu arkey in aysan baarlamaanka dhaafeyn, waxaa la siiyey muddo 14 Maalmood ah oo uu xukuumad cusub ku soo dhisaayo, taas oo ku ekeyd maalintii shalay ee Jimacada, tan ayaa noqoneysa markii saddexaad, Waxaa la aamin san yahay in dhismaha xukuumadda uu farogelin ku hayo Madaxweynuhu, isla markaana inta badan isagu keensadey, waxaana la is weydiinayaa halka Xildhibaanadu durbaanka u tumanayaan.